Tag: tombony amin'ny varotra video | Martech Zone
Tag: tombony amin'ny marketing amin'ny horonan-tsary
Antony 3 hanitarana ny tratry ny varotra amin'ny horonan-tsary
Alatsinainy Desambra 5, 2016 Alahady 15 Janoary 2017 Harrison Painter
Ny horonan-tsary dia iray amin'ireo fitaovana marketing matanjaka indrindra ao amin'ny arsenalinao mba hanitarana ny tratry ny varotra, nefa matetika no tsy jerena, tsy ampiasaina firy ary / na tsy takatra. Tsy misy resaka hoe mampatahotra ny famokarana atiny horonantsary. Mety ho lafo ny fitaovana; ny fizotry ny fanovana mandany fotoana be, ary ny fahitana fahatokisana eo imason'ny fakan-tsary dia tsy mora foana. Soa ihany isika fa be dia be ny safidy azontsika atao anio hanampiana antsika handresy ireo olana ireo. Ny finday avo lenta indrindra dia manolotra horonantsary 4K, fanovana
Monday, December 5, 2016 Sunday, January 15, 2017